Haweenka Sacuudiga oo Khaatiyaan ka taagan Dowladdooda Sababo La Xidhiidha, | Raadgoob
Haweenka Sacuudiga oo Khaatiyaan ka taagan Dowladdooda Sababo La Xidhiidha,
Sacuudi Carabiya ayaa soo jiidatay indhaha caalamka sanadkii hore markii ay haweenka ka qaadday xayiraad muddo dheer saarneyd oo ku saabsan gawaari kaxeynta.
Si kastaba, xayiraadaha haweenka saaran ayaa weli sidooda ah – gaar ahaan, “hannaanka hoggaanka ragga”, aabbaha gabadha, walaalkeed, seygeeda amaba wiilkeeda ayaa gaara go`aannada ayada ku saabsan.
Xayiraadahan ayaa waxaa toosh ku sii ifiyay markii horraantii bishan ay gabar Scauudiga u dhalatay oo qoyskeeda ka soo carartay ay isku soo xirtay qolka hoteel ku yaalla magaalada Bangkok ee dalka Thailand, iyadoo sheegtay inay ka baqayso in xabsi la dhigo haddii Sacuudiga loo celiyo.
Haweenka Sacuudiga waxaa looga baahan yahay inay ansixin ka helaan qof rag ah si ay baasbaoor u helaan, ay ugu safraan dal kale, ay waxbarasho deeq ah ka helaan dowladda, u guursadaan ama ay xabsiga uga soo baxaan.
“Tani waa wax saameyn ku leh haweeney walba oo Sacuudiyaan ah, laga soo bilaabo dhalashadeeda ilaa dhimashadeeda. Waxaa loola dhaqmaa sida in laga awood badan yahay oo kale,” ayay BBC-da u sheegtay saxafiyadda haysata dhalashada Mareykanka kana soo jeedda dalka Masar Mona Eltahawy.
Sacuudiga ayaa sanadkii 2000 meel mariyay axdiga Qaramada Midoobay ee cirrirbtirka dhammaan tacaddiyada ka dhanka ah haweenka, wuxuuna sheegay in sinnaanta jinsiga loo eegayo sida ay qabto shareecada Islaamka.
Boqortooyada asal-raaca ah ayaa sidoo kale qafiifisay xayiraaddii cayaaraha ee la saaray haweenka iyo gabdhaha, iyadoo u oggolaatay haweenka inay cayaaraha ka daawan karaan garoomada cayaaraha.
Si kastaba, khubarrada Qaramada Midoobay ayaa bishii February, sanadkii 2018 walaac ka muujiyay sida uu dalkaasi ugu guul darreystay dhaqan-gelinta sharci gaar ah oo mamnuucaya takoorka ka dhanka ah haweenka.
Hannaanka hoggaanka ragga, ayay khubarradu ku tilmaameen, inuu yahay “caqabadda ugu weyn ee haweenka ka hortaagan inay qayb ka noqdaan dhaqaalaha bulshada “.
Hay`adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sanadkii 2016 walaac ka muujisay hannaanka hoggaanka ragga, haween dhowr ah oo ka hadlay hannaankaas ayaa iyagana xabsiga loo taxaabay.
Sanadkii 2008, haweeneyda caanka ah ee u doodda xuquuqda, Samar Badawi, oo sida la sheegay uu aabbaheed tacaddi u geystay, ayaa ka soo cararatay guriga qoyskeeda iyadoo magangalyo ka heshay xarun haweenka lagu badbaadiyo.
Waxay kaddib bilowday inay si sharci ah meesha uga saarto inuu aabbaheed u taliyo.
Isagoo gabadhiisa ka aargoosanaya, ayay Samfra sheegtay inuu maxkamadda geeyay kiis uu ku eedeynayo inay amarkiisa diidday. Garsore ayaa amray in la soo xiro Samra sanadkii 2010, waxayna xabsiga ku jirtya muddo toddoba bilood ah, kahor inta dadka u dooda xuquuqda aadanaha aysan soo faragelin kiiskeeda, oo markii dambe meesha laga saaray.
Image captionMaryam al-Otaibi ayaa la xiray 100 maalmood kaddib markii ay ka cararatay guriga aabbaheed
Mariam al-Otaibi, oo ah haweeney kale oo u doodda xuquuqda aadanaha, ayaa saddex bilood xabsiga ku qaadatay sanadkii 2017, kaddib markii uu aabbaheed ku eedeeyay amardiiddo.
Waxay ka soo tagtay gurigooda, kaddib markii aabbaheed iyo walaalkeed ay tacaddiyo u geysteen iyagoo ku eedeynaya inay baraha bulshada uga qayb qaadatay ololaha looga soo horjeedo hannaanka hoggaanka ragga.
Xitaa haweenka dibadda u qaxay ayaysan u suurto gelin inay xabsi ka badbaadaan.
Sanadkii 2017, Dina Ali Lasloom ayaa si qasab ah loogu celiyay reerkooda oo ku sugan Sacuudiga, xilli ay ku sugneyd garoon ku yaalla dalka Philippines iyadoo ku sii jeedday Australia. Waxay sheegtay inay ka baxsaneysay guur lagu qasbay.
Human Rights Watch ayaa sheegtay inay heshay warra sheegaya in Lasloom ay muddo ku xirneyd xarun dhaqan celin ah. Ma cadda in markaas kaddib qoyskeeda dib loogu celiyay iyo haddii kale.
Haweenka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa muddo dheer ku baaqayay in meesha laga saaro hannaanka hoggaanka ragga.
Bishii September, sanadkii 2016 waxay Maxkamadda Boqortooyada u gudbiyeen hindise ay saxiixeen 14,000 oo qof, kaddib markii barta Twitterka lagu wadaagay baaqyo lagu codsanayo in hannaankaasi meesha laga saaro.
Sheekha caanka ah, Abdulaziz Al Sheikh, ayaa qaraarkaasi ku tilmaamay dembi ka dhan ah shareecada Islaamka, balse shan bilood kaddib boqor Salmaan ayaa soo saaray wareegto haweenka loogu oggolaanayo inay ku helaan adeegyada dowladda iyagoo ana looga baahneyn in qof rag ah uu ansixiyo.
Bishii September, sanadkii 2017, boqorka yaaa ku dhawaaqay in haweenka loo oggolaan doono inay gawaari kaxeeyaan markii ugu horreysay.
Kaddib bishii May, sanadkii 2018 – toddobaadyo uun kahor markii xayiraadda gawaari kaxeynta laga qaaday, xukuumadda Sacuudiga waxay bilowday ugaarsasho ka dhan ah haweenka u dooda xuquuqda aadanaha, iyagoo dhowr haween xabsiga dhigay.